UN က အသက်တွေဘယ်လောက်ပေးရဆပ်မှ action ယူမှာလဲ အသက်တြေပးဖို့လိုရင် အသက်နဲ့ခန္ဓာစေတးရဲတဲ့အေကြာင်း ရဲရဲရင့်ရင့်ပြောလိုက္တဲ့ နန်းဆု….. – Cele Snap
UN က အသက်တွေဘယ်လောက်ပေးရဆပ်မှ action ယူမှာလဲ အသက်တြေပးဖို့လိုရင် အသက်နဲ့ခန္ဓာစေတးရဲတဲ့အေကြာင်း ရဲရဲရင့်ရင့်ပြောလိုက္တဲ့ နန်းဆု…..
နန်းဆုလေးဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီး အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားပါဝင်နေသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။သူမကိုယ်တိုင်ပါလမ်းပေါ်ထွက် လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေသလို ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေအတွက်လည်း အစားအသောက် တွေအပြင် အခြားလိုအပ်တာတွေကိုလည်း ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။
ဒီနေ့မှာတော့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့် ပြည်သူတွေအသက်ပေးနေရတာတွေကို ယူကြုံးမရနဲ့ပဲ သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်ချက်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကတည်းက အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုစတေးရဲတဲ့အကြောင်း ရဲရင့်စွာပြောပြလာပါတယ်နော်။
“UNက လူဘယ်နှစ်ယောက်သေမှ action ယူမှာလဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့လူအရေအတွက်မပြည့်သေးလို့လား အဲ့ဒါဆိုမြန်မြန်ပြည့်အောင် ငါ့ကိုလည်းလာသတ်ကြပါ ဒီပွဲကိုစဝင်ကတည်းက အသက်နဲ့ခန္ဓာအဆုံးထိတွေးပြီးသားမလို့ စတေးရဲပါတယ်How_Many_Dead_Bodies_UN_Need_To_Take_Action. .” ဆိုပြီး နန်းဆုလေးက ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နနျးဆုလေးဟာ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ပူးပေါငျးပွီး အငျတိုကျအားတိုကျကွိုးစားပါဝငျနသေူလေးလညျး ဖွဈပါတယျနျော..။သူမကိုယျတိုငျပါလမျးပျေါထှကျ လှုပျရှားမှုတှပွေုလုပျနသေလို ဆန်ဒပွ ပွညျသူတှအေတှကျလညျး အစားအသောကျ တှအေပွငျ အခွားလိုအပျတာတှကေိုလညျး ပေးဝလှေူဒါနျးခဲ့တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျနျော။
ဒီနမှေ့ာတော့ အကွမျးဖကျဖွိုခှငျးမှုတှကွေောငျ့ ပွညျသူတှအေသကျပေးနရေတာတှကေို ယူကွုံးမရနဲ့ပဲ သူမကိုယျတိုငျကလညျးယုံကွညျခကျြအတှကျတိုကျပှဲဝငျကတညျးက အသကျနဲ့ခန်ဓာကိုစတေးရဲတဲ့အကွောငျး ရဲရငျ့စှာပွောပွလာပါတယျနျော။
“UNက လူဘယျနှဈယောကျသမှေ action ယူမှာလဲ သတျမှတျထားတဲ့လူအရအေတှကျမပွညျ့သေးလို့လား အဲ့ဒါဆိုမွနျမွနျပွညျ့အောငျ ငါ့ကိုလညျးလာသတျကွပါ ဒီပှဲကိုစဝငျကတညျးက အသကျနဲ့ခန်ဓာအဆုံးထိတှေးပွီးသားမလို့ စတေးရဲပါတယျHow_Many_Dead_Bodies_UN_Need_To_Take_Action. .” ဆိုပွီး နနျးဆုလေးက ရေးသားပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ပြည်သူလူထုတွေက စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး မေတ္တာတရားနဲ့ တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်အောင် စိတ်ထားတွေကောင်းကြာင်းကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း…..
ပြည်သူတွေရဲ့ရှေမှာ ဒိုင်းကာတွေနဲ့ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပြီး မမောမပန်းနိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ တိုင်ရွန်…..